URob Zombie uqinisekisile ukuba umboniso bhanyabhanya olandelayo uza kuyilungisa 'iMunsters' yeTV Sitcom
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	URob Zombie uqinisekisile ukuba umboniso bhanyabhanya olandelayo uza kuyilungisa 'iMunsters' yeTV Sitcom
by UTrey Hilburn III Juni 7, 2021
by UTrey Hilburn III Juni 7, 2021 3,133 imbono
isabelo	FacebookTwitterTwilleyLinkedInTumblrRedditUkugqubeka kwiWhatsappyocingoImeyli
URob Zombie yinto encinci yekhadi lasendle. Ukusuka Indlu ye-1000 Corpses ukuba 31, Zombie kuye kwaba yinto ekufanele ukuba yenziwe kunye nenqaku elipheleleyo lokwahlula phakathi kwabalandeli. URob Zombie uyazibiza IiMunsters unenzondelelo yempambano. Ude waboleka nelizwi lakhe kwingcaciso yakutshanje ye IiMunsters Umkhondo weblu ray. Isidwangube, sinentonga eshushu eshushu egama linguDragula IiMunsters isithuthi. UZombie ngoku uqinisekisile amarhe okukholelwa ukuba uza kuthatha uhlengahlengiso kumdlalo weTV IiMunsters.
Kubonakala ngathi inyani yokuba iZombie isiya eBudapest ukuya kusebenza kwiprojekthi kamva kulo nyaka iyinyani yeMunsters. Sinethemba lokubona rhoqo kwiIiMunsters ifam. Ukuqala ngomfazi uSheri iNyanga yeZombie njengoLily Munster, noJeff Daniel Phillips ukuba badlale uHerman.
Imifanekiso yendalo iphela ayikaqinisekiswa okwangoku. Kodwa, ngokuqinisekileyo sinethemba lokuba oku kuyinyani kwaye iZombie ayisiyiyo i-foolin '. Kuyaphambana ukucinga ngefilimu ye-PG okanye ye-PG-13 yeZombie. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba uEli Roth uyikhuphe nayo Indlu enewotshi ezindongeni zayo, mhlawumbi inokwenzeka.
Nicinga ntoni malunga nokuzibandakanya kukaRob Zombie kwi Iimonsters uhlengahlengiso? Cinga ukuba ulungile? Sazise kwicandelo lamagqabaza.
Indlu yeWax iyeza kumqokeleli we-blu ray ephuma kwi-Scream Factory kungekudala. Funda ngakumbi kwaye u-odole ikopi yakho apha.